Kungani Kunama-Banana Hanger angama-542 ku-Amazon | Martech Zone
Kungani Kunama-Banana Hanger angama-542 e-Amazon
NgoMgqibelo, ngoMashi 13, 2021 NgoMgqibelo, ngoMashi 13, 2021 Douglas Karr
Kukhona ama-hanger angama-banana ahlukene angama-542 e-Amazon… aqala ngentengo kusuka ku- $ 5.57 kuya ku- $ 384.23. Iziphanyeko zebhanana ezingabizi kakhulu yizingwegwe ezilula ozifaka ngaphansi kwekhabethe lakho. Isiphanyeko sikabhanana esibiza kakhulu yilesi sihle I-Chabatree banana hanger lokho kwenziwa ngezandla futhi kwenziwa ngemithombo yezinkuni esimeme.
Ngokuzimisela… Ngababheka. Ngabala imiphumela, ngayihlela ngenani, ngabe sengenza ithani elilodwa isiphanyeko sikabhanana ucwaningo.
Njengamanje, uyabuza… Ngabe lokhu kuhlangene ngani nobuchwepheshe bokumaketha… ngabe usuhambile ubhanana? (yebo, ngishilo!)
Cha, le yindatshana elula elula ekhuluma ngokuqanjwa komkhiqizo, ukukhetha umkhiqizo, futhi inani elibonakalayo - nokuthi ungazimaketha kanjani, imikhiqizo yakho, kanye nezinsizakalo zakho. Futhi ukuthi, njengebhizinisi, udinga ukubeka phambili ukusesha kwakho kwesisombululo sakho esilandelayo.
Isiphanyeko sikabhanana sinenhloso eyodwa nenhloso eyodwa kuphela… ukulengisa ubhanana ukuze bangahlali phezulu balimale kalula. Ngokumangazayo, i- i-patent uneminyaka engama-20 kuphela ubudala. Inothi eliseceleni… umsunguli uBruce Ancona naye unelungelo lobunikazi lomnikazi wephepha ... kubukeka sengathi ungumfana ochitha isikhathi esiningi ekhishini ecabanga ukuthi angabeka kuphi izinto. Buyela kuma-hanger ebhanana, noma…
Emashumini amabili eminyaka edlule, isiphanyeko sikabhanana asikaze sibe nobuchule obusha kunangaphambili Zonke iziphanyeko zikabhanana ezimakethe zinenhloso efanayo… ukwehlisa ukulinyazwa kukabhanana wakho. Ngamanye amagama, i- Inani lesiphanyeko asikashintshi. Kwenze ubhanana wakho uhlale amasonto ambalwa isikhathi eside eminyakeni engamashumi amabili eyedlule… futhi ubenza bahlale ngokufana nanamuhla.
Manje kungani abantu bezobakhokhela amanani ahlukile? Ngoba umthengi ngamunye unenani elibonakalayo elihlukile. Abanye abantu bangathanda ukuba lula kwe-hanger yebhanana engathathi isikhala sokubala, ngakho-ke bazokhokhela imodeli engaphansi kwekhawunta. Abanye bazokwazisa okunamathiselwe kwesitsha kwezinye izithelo. Abanye bazokhokha ngokususelwa ezintweni zokwakha kanye nethuba lokuthi lizobukeka lihle emakhaya abo. Futhi… noma kunjalo, abanye bazokhokha u- $ 384.23 ukuxhasa imikhiqizo esimeme kanye nengcweti yendawo eyenziwe ucezu lobuciko ekhishini lakho.
Njengoba ucabanga ngemikhiqizo noma izinsizakalo zakho, ungahle ungalethi umkhiqizo onganikeli ngenani elingaphezulu noma elincane kunkasimende lakho. Kungakho kubaluleke kakhulu ukukuqonda bawazisa kanjani umkhiqizo noma insiza yakho. Ngezinye izikhathi, udinga ukubafundisa ukuze ubasize baqonde ukuthi kungani imikhiqizo noma izinsizakalo zakho zingabiza kakhulu (noma ngaphansi) kunezimbangi zakho. Wonke umuntu wenza isiphanyeko sebhanana esihlukile.
Nginomngane wami obesebenza njenge-CEO yokuqalisa iminyaka eminingana. Ingcindezi abenayo ibingabekezeleleki. Wayenabatshalizimali ababemcindezela nsuku zonke, amaklayenti efuna izinto ezintsha, onjiniyela ababeqashwa kwezinye izinkampani, futhi imali ayitholayo yayimbi njengoba wayezama ukugcina zonke izingcezu ndawonye futhi athuthukise umbono wakhe omusha. Ibhizinisi lakhe lahluleka njengoba ekugcineni aphelelwa yimali futhi engasenamandla okuqasha ithalente elidingekayo ukuletha.
Eminyakeni ethile kamuva, ngahlangana naye ngenzela ikhofi futhi ngambuza ukuthi wenzani manje. Uphendule ngokuthi manje unenkampani egunda utshani. Ubesenwebile ukusuka ekugundeni utshani uqobo kuze kube manje eqhuba izisebenzi eziningi. Wayenza okumnandi, wayengacindezelekile kakhulu, esebenza ngaphandle, futhi ekuthanda.
Ngashaqeka… kusuka kumakhi wezinto ezintsha nobuchwepheshe bokuqalisa ukugunda utshani?
Impendulo yakhe, the utshani buqhubeka bukhula.
Uqhuba kahle manje nebhizinisi lakhe liyachuma. Ngaphandle komnotho, umphakathi otshala imali, umthetho kahulumeni, nokuncintisana… utshani buyaqhubeka bukhula futhi uyakwazi ukwakha nokukhulisa (hehe) ubudlelwano bakhe njengoba eletha insizakalo esezingeni. Akukho okusha, ukuhlinzeka ngokuzikhandla nemiphumela emihle enkingeni esibe nayo ikhulu leminyaka.
Eqinisweni, sisebenza endaweni yesikhulumi sebhizinisi lapho abadlali ababalulekile basebenza kanzima ukuthola nokuhlanganisa imikhiqizo nezici ezintsha, ukuthi izici zabo eziyinhloko zisemuva embonini. Bagxile ekwakhiweni kwento enkulu elandelayo ukushayela ukuthengisa, ngenkathi amakhasimende abo ebashiyela izixazululo ezingcono, kaningi kunalezo, ezingabizi kakhulu.
Ukuqamba akusona njalo isidingo sokuqhuba ibhizinisi eliphumelelayo.
Kukhona iziphanyeko zebhanana eziningi. Ngenkathi ezinye zilenga kumakhabethe, ezinye zifake izitsha zezithelo, futhi cishe zonke zinokubukeka okuhlukile… zonke zenza into efanayo. Kepha, kunesidingo esanele kubathengi sokuthi wonke lawa mabhizinisi akhombe imakethe futhi aqala ukuthengisa isixazululo sabo lapho.
Ibhizinisi lakho alihlukile. Kuneminye imikhiqizo nezinsizakalo ezincintisanayo ezingenza okwenzayo. Bangase bazenze kangcono ngisho. Lokho kusho ukuthi, njengomthengisi, udinga ukwazi ukufundisa izethameli zakho ukuthi kungani ulungele zona. Futhi yingakho, njengabakhangisi, kufanele uqinisekise ukuthi igunya lakho embonini yakho liyaziwa njengabathengi abacwaninga ikhono lebhizinisi lakho lokuletha leyo mikhiqizo nezixazululo.
Umehluko ekutheni abantu bathenga i-banana hanger eyodwa noma enye e-Amazon awuhlangene yini nokuthi ubhanana uhlale uhlanzekile futhi ungavuthiwe… bonke bayakwenza lokho. Umehluko usezilinganisweni, izibuyekezo, izincazelo, nokwakhiwa kwemikhiqizo. Njengomakethi, kulapho okufanele usebenzise khona isikhathi sakho - ngempumelelo marketing imikhiqizo yakho nezinsizakalo… izilinganiso, izibuyekezo, incazelo, nokwakhiwa kwemikhiqizo yakho nezinsizakalo.
Yenza umsebenzi ongcono wokumaketha, futhi uzoxhumana namakhasimende afuna imikhiqizo nezinsizakalo zakho.
Imikhiqizo Nemisebenzi Yedijithali Yokumaketha
Emphakathini wokumaketha wedijithali, sinomkhuba omubi wokuhlala njalo sifuna ipulatifomu yesiteshi senhlamvu noma isiteshi esizolungisa zonke izinkinga zethu. Kepha ezinye zezinkampani zobuchwepheshe ezinenzuzo enkulu nezikhulayo azizange zisungule nhlobo. Bavele babona ukufuneka futhi bathuthukisa indlela engcono kakhulu yokumaketha ukuthi babeyisixazululo esihle kakhulu senani elihle kakhulu.
Ungathenga izincwadi kunoma yikuphi, kepha i-Amazon isukile. Ubungathenga izicathulo noma yikuphi, kepha uZappos wakhumula. Ungakha iwebhusayithi nganoma iyiphi ipulatifomu, kepha i-WordPress isukile. Ngingabala uhlu lwamakhulu noma izinkulungwane zezibonelo.
Angisho ukuthi lezi zinkampani azisunguli… Ngimane ngikhomba ukuthi imiphumela iyafana. Uthole incwadi, wathola izicathulo, noma wethula iwebhusayithi. Ngikholwa ukuthi njengoba ivolumu, ukuqashelwa nokukhula kweza ebhizinisini labo… kulapho kuphela lapho bezokwazi khona ukuthola izinsizakusebenza zokutshala imali ngempela emisha.
Inani Lebhizinisi Lakho Nokusungula
Njengoba ubheka imboni yakho, impendulo kungenzeka ingabi ukuthi wenza kanjani okuthile okusha noma unikeze insizakalo yokuncintisana engabizi kakhulu.
Abathengi namabhizinisi ngokufanayo banezinkinga ababhekene nazo nsuku zonke ezivele zifuna isisombululo sazo. Noma ngabe kulenga ubhanana wabo, noma kuzenzela ukubhala kwabo, ukuklama, ukugunyaza, kanye nenqubo yokushicilela yencwajana yabo elandelayo. Inkinga ikhona, ukukhungatheka kwabo kukhona, futhi sebevele bayakuqonda ukubaluleka kwesixazululo.
Awudingi isici esisodwa, ukwenziwa okusha okulandelayo, noma iphuzu lentengo elehlukile uma isidingo sikhona futhi inani liyaziwa. Gxilisa ukunaka kwakho enkingeni eyinhloko imikhiqizo yakho nezixazululo ezikunikeza isisombululo.
Ukuqamba Nenani Lesixazululo Olusifunayo
Sisebenza nebhizinisi njengamanje elinelebula elimhlophe imikhiqizo yalo ezitolo ezithengisa. Ngobhadane, ukukhiywa phansi, nokuwa okulandelayo kwezitolo, babona ukuthi badinga ukufaka inketho ye-ecommerce eqonde ngqo kubathengi. Bengazi kahle ubuchwepheshe, bahlola izixazululo futhi baqala ukukhuluma nabamele abathengisi kubahlinzeki abahlukahlukene bezohwebo.
Ngemuva kokubheka wonke amathuba, banciphisa isisombululo esihle emakethe. Ingakala ngokungenamkhawulo, inikeze ukwesekwa kwezilimi eziningi, inezinkulungwane zokuhlanganiswa, ukubalwa kwentela yamazwe omhlaba, ibinenjini ye-AI eyakhelwe ngaphakathi, futhi ingaphatha izigidi I-SKU. Zathengiswa… zilungele ukutshala amakhulu ezinkulungwane kumalayisense nokuningi ekusiqashiseni ukuze sisebenzise isixazululo futhi siyihlanganise nenkundla yokumaketha esezingeni lomhlaba.
Sikhulume nabo ngakho.
Yize bekungaba yisixazululo esihle kunazo zonke futhi esakha izinto ezintsha emhlabeni, kungenzeka ukuthi sibashayele ekuqothukeni noma kube yiminyaka eyishumi ngaphambi kokuthi babone imbuyiselo yotshalomali. Babenemikhiqizo engama-75 kuphela… imali encane yesikhulumi se-ecommerce esingasingathwa. Futhi babezothengisela i-United States unyaka wokuqala noma ngaphezulu. Inhlamvu yesiliva yayizobabulala.
Iseluleko sethu bekungukuthi, esikhundleni salokho, sitshale imali ocwaningweni nasekwenzeni uphawu, bese sisebenzisa isisombululo esilula, esisheshini ngeplatifomu yokuthengisa ezisebenzisanayo lapho singagxila ekukhuliseni ukuqwashisa nasekuthengiseni ngemikhiqizo yabo. Babevele badinga i-ol 'banana hanger ejwayelekile ... akukho okunye.
Njengoba ubheke ebhizinisini lakho, ukukhomba amaphuzu obuhlungu ngaphakathi kwenhlangano yakho lapho ubuchwepheshe bungakusiza ukuthi uphumelele futhi usebenze kahle kakhulu kungahle kungadingi isisombululo esibizayo noma esisha. Kungaba ngokoqobo ipulatifomu yesoftware ekhipha, iguqule futhi ilayishe idatha ekulondolozela amahora amaningi eminye imisebenzi phansi komgwaqo.
Yenza ukuhlaziywa okufanayo namakhasimende akho… kukuphi ukukhathazeka nezikhala zabo ekutheni ukwazi kanjani ukubasiza futhi ubagcine bejabule?
Isixazululo singaba eshibhile futhi esingesona esobuchwepheshe. Kunesizathu esenza ukuthi kube nama-hanger angama-banana angama-542 e-Amazon… kunamathani abantu abawathengayo kanye neqembu lezinkampani ezenza kahle ekuhlangabezaneni nezidingo. Futhi amanani ayahluka ngokuya ngenani elibonwa yikhasimende.
Tags: Amazoniziphanyeko zikabhananainani elibonakalayoukukhetha komkhiqizoemisha umkhiqizoukumaketha komkhiqizoukubuyekezwa komkhiqizoinani lomkhiqizoInani
Inhlanzeko Yedatha: Isiqondisi Esisheshayo Sokuhlanganisa Idatha
Indlela Iwebhusayithi Yakho Ehamba Phansi Elilimaza Ngayo Ibhizinisi Lakho